Ebe: Northwest nke Ethiopia
Mpaghara: 2 156 square mita. kilomita
Elu n'elu oké osimiri: 1830 m
Ogologo: 84 kilomita
Ogologo: 66 kilomita
Nke kachasị omimi: 15 m
Osimiri na-asọpụta: obere Abbay
Osimiri na-asọ asọ: Blue Nile
Etiopia bụ obodo mara ezigbo mma, ebe ọ bụla dị n'ime ya jupụtara n'ihe pụtara. Na njem na mbara ala Africa, ọ bara uru ileta Lake Tana, nke na-ejikọta ihe ndị e kere eke na akụkọ ihe mere eme na nkwa ndị doro anya.
A bit nke geography
Tana bụ ọdọ mmiri kachasị na mba. Ọ dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Etiopia, n'ebe ugwu nke obodo Bahr Dar . A na-eji ọnụ ọgụgụ a pụrụ iche akọwa ọnụ ọgụgụ ndị a:
elu - 1830 m n'elu elu igwe;
omimi - kachasi 15 m (n'oge mmiri ozuzo);
ọnụ ọgụgụ dị mita 84x66.
Ugwu ugwu gbara ya gburugburu (a na-akpọ ha Etiopia ma ọ bụ Lunar), nke dị elu site na mita 3 ruo 4. Ọ na-asọba n'ime ọdọ ahụ karịa 50 osimiri. Ha na-abụkarị obere, nke kachasị nta bụ obere Abbay (a na-akpọkarị Blue Nile Blue). Osimiri Naịl Nile na -esi n'Ọdọ Mmiri Tana na-asọpụta, bụ nke, na-ejikọta na Sudan na White Nile, na-eme ka isi mmiri nke mmiri dị na mpaghara dum.
Kedu ihe ọdọ mmiri ahụ ga-enye onye njem nleta Tana?
A na-ewere tank dị ka onye njem nleta na-ewu ewu na Etiopia. Ndị njem si mba ọzọ kpebiri izu ike n'Africa , gaa ebe a:
lee obere mmiri mmiri dị mita 42 nke Tys-Ysat , nke dị kilomita 30 site n'ọdọ mmiri ahụ ma jiri mma ya na ike ya nweta;
Iji nwee mmasị n'Oké Osimiri Naịlị - osimiri mara mma na nke mara mma;
mụta otú ndị Aborigine si ebi, na-agba n'elu "akwụkwọ" ha, ma ọ bụ ụgbọ mmiri papaịrọs;
ghọtara ịma mma nke ụka ndị Kraịst oge ochie na ebe obibi ndị mọnk , nke ka na-arụ ọrụ;
azụ n'ime ọdọ mmiri ọdọ mmiri kachasị ukwuu na mba ahụ;
Foto a na - ese foto pelicans - ndị isi na - ahụ maka ornithofauna ọdọ mmiri ahụ.
Ihe karịrị agwaetiti iri na abụọ na-agbasasị n'elu ọdọ mmiri. Enwere uzo buru ibu ma buru ibu, ala bu ihe ubi na ndi bi na ya (obodo ndi Etiopia di n'osimiri nke ọdọ). Ndị nduzi obodo, site na ịrịọ ndị njem nleta, ịbanye n'àgwàetiti ndị kacha amasị.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla n'ime ha na-anọchite anya chọọchị Chọọchị Ọtọdọks, na ọbụna ọtụtụ. N'ọtụtụ ka ọ bụ ebe e bibiri emebi, ma e nwekwara ike weghachite ya. E wuru ụka ndị a n'oge emepechabeghị, malite na XIII. Ka oge na-aga, ndị mọnk na-awagharị awagharị, na-achọ ebe nchekwa na mgbaba site na Muslim invasions. Osimiri Tana na agwaetiti ya enweghi ike ịba mma maka nzube a. Taa, Chọọchị Ọtọdọks na chọọchị ndị a na-adọta mmasị nke ndị njem nleta na ụlọ ha na-adịghị ahụkebe (ha gbara gburugburu ma jupụta na ahịhịa amị), na-ese onyinyo nke mgbidi dị iche iche nke sitere na Bible na ụdị okpukpe dị iche iche nke na-egosi ọdịiche dị n'etiti Iso Ụzọ Kraịst Etiopia na ihe anyị na-eme.
Ụlọ nsọ kachasị ewu ewu na Lake Tana bụ:
Kebran Gabriel (narị afọ nke iri na atọ);
Narga Selassie (nke iri na asatọ).
Ndị obodo dị ezigbo enyi na ndị njem nleta. Maka ego ole na ole, ha ga-enye gị ndu ma gosipụta mma niile dị n'ógbè ahụ, gụnyere agwaetiti, nke ị nwere ike igwu mmiri na "akwụkwọ" ma ọ bụ ụgbọ mmiri.
Obodo kacha nso na Tana Lake bụ Bahr Dar . Enwere ike ịchọta ya site n'ọdụ ụgbọ mmiri si Gorgora ma ọ bụ si na Addis Ababa site n'ụgbọala, site na bọs ma ọ bụ site ụgbọ ala. Njem ahụ na-ewe oge 8-11, dabere na ụdị njem a họọrọ. Tụkwasị na nke a, na Bahr Dar i nwere ike iji ụgbọ elu na-efe ụgbọ elu nke ụgbọ elu Etiopia (ebe a nwere ọdụ ụgbọ elu).
Pamplemus Botanical Garden
Ihe ncheta si Zanzibar
Canyon nke Osimiri Ọkụ
Ime ụlọ abụọ
Kedu ihe ndị uweojii na-arọ?
Uwe obi - ụzọ kachasị mma maka bọọ mara mma
Shangui na cheese cheese
Gigi Hadid hapụrụ ụlọ ahụ n'enweghị uwe
St. Peter's Katidral (Bandung)
Kedu ka m ga - esi ehichapụ ebe a na - agbanye n'ọkụ?
Igbe nchekwa igbe na aka gị - onyinye mbụ maka ndị ị hụrụ n'anya
Kedu ihe iri nri maka nri abalị?
Mariah Carey na-eji ejiji ejiji na-eme ka ara ya mara n'ihu ọha
Ọgwụgwọ Massage - ụdị niile na ọgwụgwọ
Agba akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ - na ihe ị ga-eyi na otú e si elekọta akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ n'oge oyi?
Irland Baldwin - Ihu ihu ọhụrụ
Mmiri mmiri na-egbu
Justin Bieber chọrọ izute Jennifer Lawrence
Amara Amara - nke pụtara
Spaniel - njirimara nke ụdị
Apple jam wafers